Avereno jerena ny Cubot H2 terminal Android LEHIBE amin'ny vidiny 140 Euros fotsiny | Androidsis
Miverina izahay miaraka amin'ny video Review sy ny famakafakana feno ny terminal misy ny sinoa, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny marika fantatry ny rehetra ary mbola tsy afaka nanandrana ny tenako manokana. Ny marika resahina dia Cubot inona izany no entintsika Cubot H2 ilay tiako hoheverina ho terminal Android mahafinaritra azontsika atao amin'ny Internet amin'ny 140 euro fotsiny amin'ny tranokala samihafa izay mivarotra vokatra aziatika na koa amin'ny Amazon.
Ao amin'ny horonantsary avelako anao ambonin'ireto andalana ireto, horonantsary maharitra 37 minitra, ankoatr'izay andrana ny Cubot H2 amin'ny lafiny rehetra, Tiako ihany koa ny ahitanao azy eo alohaloha sy amin'ny fihetsika mba hahafahanao mahita ny fomba fiasan'izy io amin'ny fotoana tena izy, zavatra ankasitrahana ny mahita indrindra raha mieritreritra ny hahazo terminal Android vaovao ianao. Ka raha te hahalala ianao izay rehetra omen'ity Cubot H2 anay ity, Manoro hevitra anao aho mba tsy hanadino antsipirihany momba izay rehetra lazaiko anao amin'ny horonantsary ary koa ny fikitihana «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity» hahafantatra ny tomban'atoko manokana momba ilay terminal.
1 Famaritana ara-teknika Cubot H2
2 Ny tsara indrindra amin'ny Cubot H2
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Cubot H2
Famaritana ara-teknika Cubot H2
efijery 5.5 "IPS miaraka amin'ny teknolojia 2.5D sy ny vahaolana 1280 x 720 dia anontanio izy ireo miaraka amin'ny app 320.
Tahiry anatiny 16 GB azo ahitam-bokatra amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 32 GB ambony indrindra azo ampiana
Fakan-tsary aoriana 8 mpx miaraka amina autofocus FlashLED indroa - Touch Focus ary aperture 2.2 mifantoka - Fandraisana an-tsary feno
Fakan-tsary aloha 5 mpx misy maody hatsaran-tarehy sy firaketana FullHD
Conectividad 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G ： FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz - Wifi 802.11 / bgn - Bluetooth 4.0 - OTG - Radio FM - GPS sy aGPS
Fitaovana hafa Dual SIM - Mifoha sy mifehy ny rivotra
bateria 5000 mAh polymer lithium raikitra
lafiny 149'9 x 76'5 x 9'1 mm
lanja Gramin'ny 230
vidiny 137 euro amin'ny Amazon
Ny tsara indrindra amin'ny Cubot H2
Araka ny nolazaiko anao foana, ny famelana ny vidin'ny terminal amidy ho an'ny besinimaro izay tsy isalasalana fa ny tsara indrindra amin'ny rehetra, ny zavatra tsy maintsy asongadintsika ambonin'ny zava-drehetra dia ny bateria 5000 mAh mifangaro mampientanentana mamela antsika hanana fizakan-tena lehibe amin'ny terminal, hany ka ny mpampiasa Android mahazatra na ny mpampiasa antonony dia tsy mila handoa ny terminal mandritra ny telo andro farafahakeliny. Ary milaza aho momba ny andro lava satria ho an'ny mpampiasa Android antonony izay mampiasa ny Android manodidina ny efijery mavitrika mandritra ny adiny telo isan'andro, ity terminal ity dia haharitra nefa tsy handoa vola mandritra ny telo andro mihoatra na latsaka satria manome faharetan'ny efijery mavitrika miaraka amin'ny fifandraisana rehetra azo atao. ary miaraka amin'ny haavo famirapiratana faran'izay betsaka manodidina ny Efijery 9 ora.
Etsy ankilany, ny fitambaran'i Android 5.1 Lollipop miampy processeur quad-core sy ireo RAM Gigabytes telo misy azy Ataon'izy ireo ho terminal mihoatra ny ampy izany mba hanatanterahana ireo asa mahazatra izay ataontsika isan'andro amin'ny terminal Android, na dia mihazakazaka aza ny fampiharana mavesatra miaraka amin'izay dia tsy afaka hivezivezy amin'ny fampiasana multitasking Android izahay. Mihazakazaka aza ireo karazana lalao mavesatra kokoa Aspahlt, Call of duty, na ireo lalao noezahiko toa Maty nahatonga an'ilay bibidia 2 na ny lalao lamaody Pokemon Go, izay, na dia mety tsy toa izany aza, dia lalao iray izay mitaky loharano maro avy amin'ny Android. Ny fangorahana amin'ity farany ity fa, raha tsy manana gyroscope mitambatra isika, dia tsy afaka hampiasa ny fakantsarin'ny Cubot H2 hihaza Pokemons amin'ny fomba tena izy. Ho an'ny ambiny, raha mila terminal tsara izahay hilalao Pokemon Go tsy hatahotra ny ho lany ny bateria afaka roa ora, tsy isalasalana fa terminal Android tsara io.
Ny zavatra tsara iray hafa izay tsikaritro momba ny Cubot H2 tamin'ity volana farany nampiasana fatratra ny terminal ity dia rehefa miteny aminao aho amin'ilay horonantsary mifatotra dia afaka, miaraka amin'izay aho Nilalao Pokemon Go aho ary nandrakitra ny efijery Android-ko miaraka amin'izay nampiseho varavarankely mitsingevana ny fijerin'ny fakantsary Cubot H2 eo aloha, koa miaraka amin'izay afaka manome fifandraisana tsy misy tariby amin'ny alàlan'ny Wifi amin'ireo terminal Android hafa izay nilalao Pokemon Go ihany koa, ary izany rehetra izany dia tsy nisy fatiantoka herinaratra na fanapahana ny famantarana GPS na fifandraisana Internet. Noho izany amin'ny heriny sy ny fahombiazan'ny rafitry ny fizahana dia tafita soa aman-tsara.
Eo amin'ny sisin'ny ny fakan-tsary tafiditra, na ny eo aloha na ny ao aoriana amin'ny resaka sary na fandraisam-peo dia manana fakan-tsary mendrika mihoatra izany isika mazàna manome loko ny loko kely loatraMazava be fa ambony noho ny nandrasako azy ireo izy ireo.
Mikasika ny volan'ny terminal dia manana a mihoatra ny habetsaky ny herin'ny habetsahana Mba tsy mila headphones hijerena horonantsary na hihaino fampandrenesana sy antso na dia any amin'ny toerana be tabataba aza, ny kalitaony dia zavatra iray hafa satria mirona amin'ny feo am-bifotsy izay manodikodina be loatra amin'ny habeny avo indrindra.
Farany, te-hanasongadina ny fifandraisany amin'ny telefaona sy ny angon-drakitra aho, ary miatrika ny a Dual Sim miaraka amina IMEI roa ary izany koa dia misy Fifandraisana 4G LTE izay mampifandray ny tarika 20 na tarika 800 mhz miasa any Espana
Ny ratsy indrindra amin'ny Cubot H2
Amin'ny lafiny ratsy an'ny Cubot H2 dia mila manasongadina ny kalitaon'ny feo isika, ary izany dia raha toa ka amin'ny lafiny herinaratra dia mihoatra ny ampy na dia any ivelany sy any amin'ny faritra be tabataba aza, araka ny efa nanamarihako teo aloha, ity feo ity feo am-bifotsy ary na dia amin'ny ambaratonga avo indrindra aza dia mety hanodinkodina sy hanelingelina kely izany.
Ny lafiny ratsy iray hafa izay terena haneho hevitra momba ny Cubot H2, dia tsy isalasalana fa ny refy ary indrindra ny lanjany, ary izany dia miatrika Fantsona lehibe ahazoana fahasembanana lehibe indrindra ho an'ny maro ny lanjany 230 grama. Ny lanja izay, na dia be aza izany ary ity no zavatra voalohany ho tsikaritsika rehefa esorina ny boaty ao anaty boaty, dia zatra izany haingana ny olona iray, farafaharatsiny mba ho ahy manokana, ary tsy miafara amin'ny fahitana azy be loatra ary bebe kokoa rehefa hitantsika ny fahaleovan-tena lehibe omen'ny bateriny 5000 mAh. Ny vidiny izay tsy maintsy aloa amin'ny fananana terminal manana fizakantenan-tena tsara.
Tsy misy mpamaky sidina
Kalitaon'ny feo avy amin'ireo mpandahateny anatiny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Avereno jerena ny Cubot H2 terminal Android LEHIBE amin'ny vidiny 140 Euros fotsiny
Noho io vidiny sy fiasa io dia tsy hitako izay mahaliana…. Famaranana HD ho an'ny 5.5 ″, fikirakirana ratsy, ny lanjany mihoa-pampana ho an'ny bateria 5.000mAh ihany. Ho an'ny vidiny mitovy dia mahazo 3Gb ram ianao, mpanam-pahaizana tsara kokoa, mpamaky ny rantsantanana ary vatana vy.
Valiny amin'ny mpihazakazaka